SuitCase yeMacBook, bhegi re ultrathin ye laptop yako | Ndinobva mac
Gumi nembiri maSouth akavhura Ultra-tetepa kabhegi yeMacBook yako. SuitCase ndiyo nyowani inotakura kosi inosanganisa kuonda uye kureruka kwenyaya pamwe nekushanda kwehombodo.
Paunenge uchifunga zvekufambisa laptop yako, kazhinji pane maviri akanyatsosarudzika sarudzo: rakatetepa uye rakatetepa ruoko rwekudzivirira, kana hombe, mukobvu uye mukobhuru bhegi. Sarudzo yekutanga yakasununguka uye inodzivirira laptop yedu, yechipiri sarudzo inoshanda zvakanyanya kana zvasvika pakutakura, nekuda kwekuti ivo vanosanganisira mubato uye vanokutendera kuti uchengete zvimwe zvinhu, zvakaita semapepa kana zvishongedzo. Gumi nembiri maodzanyemba anga achida kusanganisa iwo maviri sarudzo mune yayo nyowani SuitCase yeMacBook, Kugadzira zvishongedzo zvaunogona kushandisa zuva nezuva kuchengetedza chako uye panguva imwechete iwe unogona kuzvitora chero kupi nekutenda kumubato wayo, kusanganisira muhomwe yemukati maunogona kusanganisira zvishongedzo zvakaita semapepa, tambo dzeUSB-C kana kunyange diki inotakurika dhisiki.
Iyi SuitCase kubva gumi nembiri yekumaodzanyemba inoumbwa nematanho matatu: yepakati epurasitiki zvinhu zvinodzivirira yako laptop kubva kunekunze kunetswa, zvakadai semapundu kana kudonha; microfiber yemukati mechikamu iyo inotarisira iyo aluminium pamusoro peMacBook yako kuti igare ichigara sezuva rekutanga rawakaburitsa mubhokisi; chifukidziro chekunze chemachira, grey, inopesana nemvura. Zvese izvi zvakasanganiswa nezip iyo inobvumira kuvhurwa nekukurumidza nekuvhara kwehombodo, uye mubato weganda wekutakura.
Dhizaini yemukati yebhegi rakapedzwa nehomwe yakakura zvakakwana kuisa magwaro (kunyangwe mafios pane 16-inch modhi), tambo yeUSB-C yekumisikidza iyo MacBook kana kunyangwe diki SSD dhiraidhi kutakura akakosha mafaera nguva dzose uine iwe .. Rubha mabhendi zvine hungwaru chengeta chepamusoro chivharo chinogara chakanamatira kubutiro reMacBook yakosaka unogona kushanda palaptop yako usingatore kuburitsa mubhegi. Inonyatsonaka semuenzaniso kushanda neLaptop pamakumbo ako.
Sezvo chiri mucherechedzo weimba, bhegi rine dhizaini yakangwara ine chinhu chidiki mukona imwe kwaunogona kuona nyanza yeTwelve South. Mukati maro chete ndipo patinowana chinyorwa chine mucherechedzo uye zita rezvishongedzo. Kwose kupera kwenyaya, mune zvese zvinhu zvayo, kunonakidzaOse maviri zipi uye ese seams akapedzwa zvakakwana vachishandisa mhando yepamusoro yemachira. Saizi yeiyo bhegi inokutendera kuti uenderere mberi nekushandisa bhegi rekufambisa kana zvichidikanwa.
Gumi nembiri maSouth akakwanisa kugadzira kabhegi kune yako MacBook iyo inosanganisa akanakisa zvivakwa zveiyo Ultra-yakatetepa sleeve uye inotakura kesi. Kudzivirirwa, kunyaradzwa uye dhizaini mune iyi nyowani SuitCase yeMacBook iyo yausingakwanise kunetseka kana zvasvika pakutakura yako yakanaka uye isina kusimba aluminium laptop. Inowanikwa ye13-inch (MacBook Pro 13 uye MacBook Air) uye 16-inch (MacBook Pro 16-inch) mamodheru, unogona kuitenga pawebsite gumi nembiri yeSouth (link) ye $ 69.99 uye $ 79,99 zvakateerana, kana paAmazon (chete 16 ″ modhi parizvino) ye € 88,31 (link)
Chiedza uye mutete
Inofambisa kutakura uye inodzivirira
Dhizaini dhizaini uye inogumisa
Hapana nzvimbo yemagwaro eA4 pane iyo 13-inch
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » SuitCase yeMacBook, bhegi rakasviba-shoma kune yako laptop
Cetelem ajoina iyo Apple Pay sevhisi nemakadhi ayo